sector - Synonyms of sector | Antonyms of sector | Definition of sector | Example of sector | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for sector
Top 30 analogous words or synonyms for sector
Boot sector ကွန်ပျူတာကို boot လုပ်ပေးနိုင်ရန် လိုအပ်သော စနစ်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည့် Disk တစ်ခု၏ ပထမဆုံး sector ဖြစ်သည်။ Disk ကို Boot လုပ်ရန် သို့မဟုတ် စတင်ရန် အသုံးပြုသည့် BIOS ပရိုဂရမ်များကို Laod လုပ်ရန် disk ၏ layout နှင့် ပရိုဂရမ်သွင်း code များကို သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသော သတင်းအချက်အလက် အလုံအလောက်ပါဝင်သည်။ ယင်း sector ပျက်စီးသွားပါက ကွန်ပျူတာကို boot လုပ်ရန် ယင်း disk ကို အသုံးပြု၍ မရတော့ပါ။
Jatropha To develop the industrial sector of the country.
သိန်းလွင်၊ ဒေါက်တာ ၂၀၀၂ - နှစ်ဦးပိုင်းမှစတင်ပြီး ပညာရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် အကြံပေးခြင်း၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေ။ ADBနှင့်ပညာရေးဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော Education Sector Study in Myanma-လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်။ "နိုင်ငံတကာပညာရေးနှင့် မြတ်ပညာ"(ကောင်းသန့်စာပေ)ထွက်။ "မိဘတို့၏သူငယ်ဥယျာဉ်"(မုံရွေး)၊ "မိဘတို့၏အရိပ်ပြစကား လက်ဆောင် မွန်များ" စသည့် စာအုပ်များထွက်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ CSG Holding is the largest architectural glass manufacturer in China. Vanke is the largest residential real estate developer in China. In the financial sector, Shenzhen Development Bank, China Merchants Bank and Shenzhen City Commercial Bank are some of the largest banks in China, with headquarters in Shenzhen.
နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒ အရင်းရှင်စနစ်ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမှုကို ဈေးကွက်အင်အားက အဆုံးအဖြတ်ပြုသည့် ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဆိုင်မှု(Private Sector) ဦးစားပေးစနစ်ဖြစ်သည်။ အရင်းရှင်စနစ်အောက်တွင် (Capitalist mode of production) အရင်းစုဆောင်းမှုကို တစ်သီးပုဂ္ဂလများ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများက ကြီးကြီး မားမားထိန်းချုပ် ထားလေသည်။ သို့သော် တကယ့်လက်တွေ့တွင် မည်သည့်နိုင်ငံမှ အရင်းရှင်စနစ်ချည်း သီးသန့် ကျင့်သုံးကြသည်တော့ မဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်းရော၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်းပါပါဝင်သည့် အရောအစပ် (mixed economy) ပုံစံမျိုးကို နိုင်ငံအများစုက ကျင့်သုံးကြလေသည်။ အများစုသော အရင်းရှင် စီးပွားရေးစနစ်ကျင့်သုံးသော နိုင်ငံများတွင် အစိုးရများမှ အရင်းရှင်စနစ်၏ ဓနခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သတ်သော မညီမျှမှုကို ညီမျှမှုရှိစေရန် အစိုးရမှ ဝင်ငွေဖြန့်ခွဲမှု မူဝါဒကောင်းကို ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း မျိုးလည်းရှိပါသည်။ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်အစရှိသော စကင်ဒီနေးဗီးယားနိုင်ငံများသည် (Scandinavia Countries) ပြည်တော်သာနိုင်ငံများ “Welfare state” နိုင်ငံများဖြစ်ကြလေသည်။
ဟူနန်ပြည်နယ် ဟူနန်ပြည်နယ်၏ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာ စပါးနှင့်ဝါဂွမ်းဖြစ်သည်။ တုန့်ထင်အိုင်ပတ်ဝန်းကျင်သည် Hunan's traditional crops are rice and cotton. The Lake Dongting area is an important center of ramie production, and Hunan is also an important center of tea cultivation. Aside from agricultural products, in recent years Hunan has grown to become an important center for steel, machinary and electronics production, especially as China's manufacturing sector moves away from coastal provinces such as Guangdong and Zhejiang.
ရှိန်းကျိန့်မြို့ In 2001, the working population reached 3.3 million. Though the secondary sector of industry had the largest share (1.85 million in 2001, increased by 5.5%), the tertiary sector of industry is growing fast (1.44 million in 2001, increased by 11.6%). Shenzhen's GDP totaled CNY 820.1 billion in 2009, up by 10.7 percent over the previous year, withaGDP per capita of US$13,581 as of 2009. Its economy grew by 16.3 percent yearly from 2001 to 2005 on average. The proportion of the three industries to the aggregate of GDP was 0.1:46.7:53.2 in 2009. The proportion of the primary industry to GDP was down by 13.4%, and the tertiary industry was up by 12.5%. Shenzhen is in the top ranks among mainland Chinese cities in terms of comprehensive economic power. It ranked fourth in GDP among mainland Chinese cities in 2001, while it ranked the top in GDP per capita during the same period. Its import and export volumes have been first for the last nine consecutive years. It is the second in terms of industrial output. For five consecutive years, its internal revenue within local budget ranks third. It also ranks third in the use of foreign capital.